Manc United, Chelsea, Bayern, Juventus oo guul gaaray & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray tartanka Champions League … SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 20 Okt 2021. Kulammo ka tirsan heerka guruubyada tartanka UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaaray, iyadoo kooxaha waa weyn qaarkood ay ciyaareen.
Kooxaha Manchester United, Juventus, Barcelona, Chelsea iyo Bayern Munich ayaa ugu madax fiiqan kooxaha caawa ka ciyaaray tartanka UEFA Champions League.
Kooxda Chelsea ayaa guul weyn ka gaartay naadiga Malmo FF kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, kulan xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Stamford Bridge, goolasha Blues waxaa u kala dhaliyay Jorginho Havertz iyo Christensen.
Dhankeeda kooxda Bayern Munich ayaa guul ka soo heshay naadiga Benfica oo ay booqatay, waxayna kaga soo adkaatay 0-4 iyada oo goolasha ay u kala dhaliyeen Lewandowski, Leroy Sané, iyo gool uu iska dhaliyay xiddiga Benfica ee Everton.
Manchester United ayaa sidoo kale guul soo laabasho ah kaga gaartay garoonkeeda Old Trafford, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2, United-ka waxaa goolasha u kala dhaliyay Rashford, Maguire iyo Cristiano Ronaldo.
Hadaba halkaan hoose ka eeg guud ahaan natiijooyinka kulammadii saddexaad ee caawa laga ciyaaray marxaladda Guruubyada ee tartanka UEFA Champions League,:-
"Ed Woodward waxa uu ciyaartoyda Man United ula dhaqmi jiray sida caruurta" - Luke Shaw